देशभर हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवसमनाइरहँदा एकपक्षले भने ‘ब्ल्याक आउट’को तयारी गरेको छ । यस दिवसलाई विरोध गर्दै आइरहेका मधेशवादी दलहरुमध्ये एक दल तटस्थ बसेको छ भने अर्को दलले विरोध गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । यही अन्योलताका बीचमा संविधान दिवस मनाइरहेको छ राज्यले । संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दा पनि किन संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन ? संविधानमा कहाँ त्रुटी भयो ? यिनै विषयहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र महतोसँग गरिएको कुराकानीः
तपाईं कानुनको ज्ञाता भएको नाताले संविधान दिवस दिनलाई कसरी सम्झनु हुन्छ ?
सुरेन्द्र महतोका अन्य लेख तथा रचनाहरु